Umshini Wokugcwalisa Amanzi Asekhona
Umshini Wokugcwalisa Amanzi Akhazimulayo
Umshini Wokugcwalisa Amanzi Ebhodlela Lengilazi
Ibhodlela elincane le-PET Umshini Wokugcwalisa Amanzi
3-5L Umshini Wokugcwalisa Amanzi
Umshini Wokugcwalisa Amanzi angama-5 Gallon
Umshini Wokugcwalisa Isiphuzo Esithambile Sekhabhoni
Umshini Wokugcwalisa Isiphuzo Esingena-carbonated
I-Juice Hot Filling Line
I-PET Ibhodlela Lokugcwalisa Umshini Wokugcwalisa Umshini
Umshini wokugcwalisa i-Beer Wine Liquor
Umshini Wokugcwalisa Ubhiya Webhodlela Lengilazi
Ulayini womshini wokugcwalisa ibhodlela le-Glass Liquor
I-Oil Flling Machine Line
Ukwelashwa kwamanzi & Pasteurizer
Uhlelo Lokwelapha Amanzi
Umshini Wokugcwalisa Uju
Umshini Wokugcwalisa Imithi
10ml Umshini Wokugcwalisa Uketshezi Lwe-Eye Drop
Umshini Wokugcwalisa Isiraphu
Umshini Wokugcwalisa Utshwala
Amaphilisi, I-Capsule kanye Nomshini Wokugcwalisa Ithebhulethi
Umshini Wokugcwalisa I-Cream Tube
Umshini Wokugcwalisa Ibhodlela Lokhilimu
I-Shampoo Filling Machine Line
Umshini Wokugcwalisa Wezinzipho wasePoland
Umshini Wokugcwalisa I-Chemical Liquid Cup
I-Automatic Hand Sanitizer Filling Machine Line
Umshini Wokufaka I-Linear Capping Ozenzakalelayo
Umshini Wokulayisha I-Cap Ozenzakalelayo
I-Round Bottle Sticker I-HAY Series
Top Side Sticker Lebula Machine HAP Series
Front and Back Side Labeler INOMBOLO
Lungisa Uchungechunge Lwesitikha Sendawo ye-HDY
Uchungechunge Lwezitikha Ezivundlile ze-HAW
Umshini Wokulebula we-Cold Glue
Umshini Wokufaka ilebula we-Melt Glue oshisayo
Umshini Wokulebula we-Sleeve Sleeve
Umshini Wokupakisha Isikhwama Samanzi
Ubisi/ijusi/omunye Umshini Wokupakisha we-Liquid Sachet
Isoso/unamathisele Umshini Wokupakisha Isikhwama
Umshini Wokupakisha Impushana
Ubhontshisi Wekhofi/Umshini Wokupakisha Wamantongomane/Amagranule
Umshini Wokupakisha Isikhwama Setiye
Umshini Wokugcwalisa Isikhwama Sejusi
Umshini Wokupakisha Ovundlile
Ukulethwa Okusha! Umshini Wokulebula we-HAP200 Flat Surface Webhokisi Elincane
Omunye umshini wokulebula wezitikha ze-Higee olethwe e-USA, lo mshini wokulebula ongaphezulu wenziwa ngendlela oyifisayo ngokusekelwe kumodeli yethu ye-HAP200. I-HAP200 iwumshini wokulebula endaweni eyisicaba okwazi ukwenza amalebula aphezulu azo zonke izinhlobo zezinto eziyisicaba, njengamabhokisi, amaphepha, amabhokisi, amabhlogo, amathini, izivalo, njll.
Ulayini wokulebula wokugcwalisa utshwala wekhasimende lase-Kuwait
Ukulethwa kwethu okusha wulayini ophelele wokukhiqiza utshwala obuzothunyelwa eKuwait. Amabhodlela kanye nezidingo zeklayenti akuvamile kakhulu futhi kujwayelekile kakhulu njengesibonelo somugqa wokugcwalisa owenziwe ngokwezifiso wokukhiqiza umthamo omncane ozenzakalelayo. *umugqa wokugcwalisa utshwala Ake sethule ...
Yini okufanele uyilungiselele ifektri yakho entsha kapende wesifutho?
Amakhasimende amaningi afuna ukungena embonini yokukhiqiza upende wesifutho afuna ukwazi ukuthi yimaphi amalungiselelo okufanele enziwe ngaphambi kokukhiqiza. Isihloko esilandelayo sizokwethula ngokuningiliziwe ngezingxenye ezintathu zezinto zokwakha, indawo ezungezile kanye nemishini. Uma ungumfundi oqalayo, lesi sihloko singakusiza. ...
Uyini umshini wokufaka amakhodi? Zingaki izinketho onazo zokwengeza iphrinta kulayini wakho wokugcwalisa wokugcwalisa?
Yini i-Coder? Amaklayenti amaningi abuze lo mbuzo ngemva kokuthola ikhotheshini yomshini wokulebula isitikha. Ikhodi iphrinta elula kakhulu yamalebula. Lesi sihloko sizokwethula kumaphrinta ambalwa ajwayelekile emugqeni wokukhiqiza. 1, Umshini Wokufaka Amakhodi/Umshini Wokufaka Amakhodi Umshini wokubhala amakhodi olula kakhulu uyinhlangano...
Ukugcwaliswa okubandayo kwe-Aseptic nokugcwalisa okushisayo
Kuyini ukugcwaliswa okubandayo kwe-aseptic? Ukuqhathaniswa nokugcwaliswa okushisayo kwendabuko? I-1, Incazelo yokugcwalisa i-aseptic Ukugcwaliswa okubandayo kwe-Aseptic kubhekisela emakhazeni (okushisa okuvamile) ukugcwaliswa kwemikhiqizo yesiphuzo ngaphansi kwezimo ze-aseptic, okuhlobene nendlela yokugcwalisa ukushisa okushisayo okuvame ukusetshenziswa ...
Yini ethinta impilo yesevisi yomshini?
1. Okokuqala: Izinga lomshini. Abakhiqizi abahlukene nezinhlobo ezahlukene zemishini bangasebenzisa izingxenye ze-elekthronikhi zemikhiqizo ehlukene kanye nokucushwa. Umshini wakhiwe ngezindlela eziningi, futhi indlela ngayinye ixhunywe ngezesekeli ezahlukene. Okuphezulu...
Ukuvakasha Kwekhasimende LaseCongo Lokugcwalisa Umshini.
Phakathi Nombukiso Wesibili Wokungeniswa Kwamazwe Ngamazwe Wase-China ngoNovemba, ithimba le-Afrika lowezi-2019 lifika e-Shanghai livela e-Congo, eNingizimu Afrika. Abanikazi bavakashele futhi bahlola imishini abayifunayo, imboni yethu ingumhlinzeki womshini wokugcwalisa obalulekile ohlelweni lwabo. Thina, i-Higee Machinery, i-suppli esekwe ekukhiqizeni...
Iyini inzuzo kanye nokubi kwe-PLA ne-PET ibhodlela lezinto ezibonakalayo embonini yokugcwalisa?
Ngokusekelwe odabeni lokuhlukanisa udoti, izindleko nokuvikelwa kwemvelo, ingabe ibhodlela le-PLA yilona elihamba phambili embonini yesiphuzo? Kusukela ngomhlaka-1 Julayi 2019, i-Shanghai, i-China isebenzise ukuhlukanisa udoti okuqine kakhulu. Ekuqaleni, kwakukhona othile eduze komgqomo kadoti owasiza futhi...
wakhuluma kanye nendawo eqondile
umehluko phakathi kohlobo lwebhande le-roller kanye nohlobo lwendawo emile yokulebula ibhodlela eliyindilinga Isikhathi esiningi, abathengi badidwa umshini wokulebula webhodlela eliyindilinga onomshini okhulumayo futhi osendaweni engaguquki. Bangalebula ibhodlela eliyindilinga. Yimuphi umehluko? Singawukhetha kanjani umshini ofanelekayo? Masingene...
Ukuthola kanjani ukwethenjwa kwamakhasimende ekusebenzisaneni kokuqala
Mayelana nokuthengwa komshini wezimboni kumakhasimende akwamanye amazwe, yiziphi izici ezingamaphuzu abaluleke kakhulu okwenziwayo? Manje singathanda ukuxoxa ngalolu daba kwelinye lamacala esihlangabezane nawo muva nje. Isendlalelo: I-Cali iphuma komunye womkhiqizi wase-Los Angeles, e-USA, inkampani idinga...
I-Chinia Machinery Fair eMoscow 2018
2017 China Technical Equipment & Commodities Exhibition
I-Higee Machinery (Shanghai) Co., Ltd.